Luminta file hal noqon kartaa mid aad u niyad-jab. Bal qiyaas laga badiyay gal ah la files badan oo muhiim ah, sawirada, iyo macluumaad kale. Faylal ma heli laga badiyay kaliya marka user iyaga tirtirtaa. Mararka qaarkood, nidaamyada cillad iyo cajaladaha adag aad u kharribmay. Nasiib wanaag, ku dhawaad ​​kasta qalab (computer, laptop, xitaa aad casriga ah) waxaa loogu talagalay si ay mar aad tirtirto file ah waxa aan weligiis tageen.
Kombiyuutaro iyo casriga ah dhammaan xogta aad xamili si gaar ah. Marka aad tirtirto file ama folder, waxa aanu si joogto ah baaba'aan. Nidaamka fudud iyaga shabbadeeysa dib u isticmaal. The files iyo fayl joogo dhawrsan ilaa xogta cusub iyaga overwrites. Taasi waa sababta waa inaad isku daydo inaad soo kabashada folder sida ugu dhaqsaha badan.
Tip koowaad waxaa la, markii kabsaday files tirtiray, hubi in aad soo drive in kale. Waa maxay sababta? Waa hagaag, maxaa yeelay, waxay ka dhigan tahay kabashada muqato faylka si drive ka. Oo haddii aad soo kabsaday files kala duwan, qaar ka mid ah waxaa dhici karta in overwritten inta ay socoto dib u soo kabashada. Waxaad badbaadin karo files aad soo kabsado si disk kale u adag, disk adag dibadda, ul USB, ama qalab kale oo dibadda kasta.
Sidoo kale, xusuusnow in aysan suuragal aheyn inuu ka soo kabsado files ka drives jir ahaan burburay. Xataa Softwares kabashada ugu qaalisan ma uu awoodi doono inuu ka soo kabsado files si buuxda, qayb ahaan uun. Halkan waa wax yar oo ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada qiimeeyo, waayo, waxaad isku dayaan in ay ka soo.
Top Saddex Tools Wixii kabashada faylasha iyo fayl
Haddii aad raadinayso ee software ugu fiican file lacag la'aan ah iyo folder soo kabashada, waxa uu noqon lahaa Recuva. First of dhan, Recuva waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. All inaad samayso waa la doorto haddii aad raadinayso file gaar ah ama iskaan karaan dhammaan faylasha. Markaas, waxaad dooran kartaa drive la doonayo, ama iskaan oo dhan ee drives your computer ee. Recuva taageeraa nidaamka file baruurta, exFAT iyo NTFS.
Ka dib markii dhowr drives ah, Recuva muujin doonaa dhammaan faylasha helay (la Falanqeynta sanamyo). Haddii aad rabto in ka badan scan user-qeexay, ka dibna dooran Advanced Mode. Advanced Mode siisaa doorasho badan, sida Deep Scan. Dib u eegista Qaar ka mid ah ayaa la xaqiijiyay in Recuva waa ka waxtar badan qaar ka mid ah Softwares kabashada premium halkaas.
Ka hor inta aan wax ku saabsan PhotoRec, ma heli cabsi by sawirka. Users badan ayaa ka dhiidhiyaan by PhotoRec sababta oo ah interface DOS oo kale ah. Laakiin, waxaad og waxay dhihi - marnaba ma xukumi buug ay cover.
PhotoRec waa software ah aad u awood badan oo soo kabashada la ordi karaan by Windows, Linux, Mac OS X, Sun Solaris iyo xitaa • FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Software Tani waxay shaqayn kartaa inta badan nidaamka file iyo noocyada qalabka. Aqoon ayaa in ka badan 200 oo ah qaabab file kicisaa fursadaha aad soo kabashada sawir guul.
Marka ay timaado in interface adag-raadinta barnaamijka, runta waa PhotoRec waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Barnaamijka The "heysta gacantaada" oo aad Socon tallaabo kasta oo ka mid ah geeddi-socodka dib u soo kabashada. PhotoRec ku salaysan yahay shaqeynayaan, ma interface ka.
Laakiin mararka qaarkood, freewares kuma filna. Haddii aad raadinayso mid ka mid ah qalabka soo kabashada ugu awooda badan waxaa jira, markaa in aad isku daydo ka soo Wondershare Data Recovery . Waxaad isku dayi kartaa barnaamijka baxay lacag la'aan ah, iyo haddii aad jeceshahay in aad ka iibsan kartaa $39.90e kaliya.
Waa maxay sidaas u weyn oo ku saabsan Wondershare Data Recovery? Waa hagaag, ha ka bilowno ay hindiseen taageeray. Wondershare Data Recovery Taageertaa Recycle Bin, kaararka xusuusta, drives adag, drives saari karo, flash drives iyo xitaa digital kaamiro / kaamirada. Sidaas, asal ahaan ay taageerto qalab kasta oo ay jiraan.
Wondershare Kaa caawin doona inaad ka soo kabsado folder aad tirtiray waqti sababta oo ah noocyo ka balaadhan oo ah nooc file taageeray. Qalab undelete Tani soo kaban karto oo dhan document files, sawir, video, audio, files archive iyo xitaa fariimaha iyo emails.
Wondershare Data Recovery Ceshan doonaa fayl iyo files tirtiray shil, laakiin sidoo kale faylasha, kuwaasi oo ay tirtiray sababtoo ah hawlgalka aan habboonayn, fayrusyada computer, shilalka disk adag, ama xataa qaab-dhismeedka xijaab burbursan oo keliya ma aha.
Hadda, waxaan idin wareersan laga yaabaa. Haddii aad si qalad ah la tirtiro gal ma waqti dheer ka hor, markaas software si xor ah waa doorasho kugu habboon. Fursaduhu waxa weeye inay faylasha aad u soo baxo. Softwares Free sida Recuva iyo PhotoRec taageeraan badan oo nooc file. Recuva waa xor ah oo si sahlan loo isticmaali, halka PhotoRec sidoo kale waa lacag la'aan, laakiin waxa ay u ekaan karaan dhib u isticmaala qaar ka mid ah. Softwares waxay bixiyaan habka ugu fudud (free) soo baxay.
Laakiin, haddii freewares aan helo karo fayl iyo faylasha aad, ama ka soo kabsadaan waxay si guul ah, in ay tahay meeshii ay talaabooyin Wondershare Data Recovery in. Waxa ay taageertaa filetypes dheeraad ah, iyo waxa ka sii horumarsan oo ka waxtar badan Softwares lacag la'aan ah. Barnaamijkan wuxuu soo kaban karto, files iyo fayl oo la tirtiray xitaa sanad ka hor.
Users Mac ay ceeboobi doonaan ka dib markii reading xukunka soo socda. Recuva iyo PhotoRec ma taageeri Mac OS X. Laakiin, ha ka welwelin weli waxaa jira qalab badan oo undelete xor ah oo aad nidaamka.
Si kastaba ha ahaatee, Wondershare Data Recovery taageertaa X. Mac OS Halkan waa tutorial fudud oo dadka isticmaala Mac ku saabsan sida inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Trash isticmaalaya Wondershare.
Tallaabada koowaad waa in la doorto ikhtiyaarka u Khasaaray Recovery File. Doorashadan waxa ka soo celiyo files ka xijaab (ama xitaa warbaahinta laga saari), waxba ma ahan hadii la tirtiray by Comman + tirtirto ama weelna Trash.
Markaas, Skaanka drives la doonayo, haddii aad leedahay wax ka badan hal drive aad Mac.
Marka gool scan ah, dhammaan faylasha aad tirtiray lagu qori doonaa wadiiqadooda asalka ah. Faylal ay aad weelna Trash waa in "Trash" folder. Haddii aad xusuusan magaca faylka, aad ka raadin kartaa in bar raadinta.
Tallaabada ugu dambeeya waa in la badbaadiyo files ku disk kale ama xijaab.
> Resource > Ladnaansho > 3 Siyaabo inuu ka soo kabsado tirtiray fayl